भारतको सुखद् शुरुवात, श्रीलंकामाथि एक दर्जन गोल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भारतको सुखद् शुरुवात, श्रीलंकामाथि एक दर्जन गोल
थिम्पु, भुटान । महिला साफ च्याम्पियनशिपको साविक उपविजेता भारतले श्रीलंकालाई एक दर्जन गोल गर्दै प्रतियोगितामा सुखद् शुरुवात गरेको छ।
थिम्पुको चाङली मिथाङ रंगशालामा आजदेखि शुरु भएको १५ वर्षमुनिको उद्घाटन खेलमा भारतले श्रीलंकालाई १२-० गोलअन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद् शुरुवात गरेको हो।
भारतले खेलको पहिलो हाफमा ६ गोल ग-यो भने दोस्रो हाफमा पनि ६ गोल नै थप्यो। भारतका लागि कप्तान सिल्की देवीले ह्याट्रिक पूरा गरिन्।
उनले खेल शुरुवाती पहिलो मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई पहिलो अग्रता दिलाइन् । त्यस्तै उनले खेलको २० र ४४औँ मिनेटमा दुई गोल थपिन्।
त्यसैगरी भारतकी अभिका सिंह, सुनिता मुण्डा र अञ्जुले दुई दुई गोल गरे। अभिकाले खेलको १४ र ५९ औँ मिनेटमा गोल गरिन् भने सुनिताले खेलको ४२ र ७९ तथा अञ्जुले खेलको ८७ र ८९औँ मिनेटमा गोल गरिन्।
त्यसैगरी भारतकी अर्की खेलाडी लेण्डा कोमले खेलको ६ मिनेटमा गोल गरिन् भने खेलको ४७ मिनेटमा कृतिना देवी र खेलको ७२औँ मिनेटमा किरणले एक एक गोल थपे। श्रीलंकाले खेलको ६२ औँ मिनेटमा पाएको पेनाल्टीलाई समेत सदुपयोग गर्न सकेन। रासस